Africa Intelligence: Xiriirka ITOOBIYADA cusub ee shacabka laga qariyay – Somali Top News
Beryahan waxaa socday sheekooyin ku saabsan suurtagalnimada in ciidan 20,000 askari oo Eritrean ah la geeyo Soomaaliya. Lama yaabin waayo waxaan dareemayey baahida weyn ee amni ee dalka ka jirta iyo sida AMISOM uga niyadjabsan tahay qorshaha kala guurka ee la doonayo in masuuliyadda amniga loogu wareejiyo Ciidamada Soomaaliya, kuwaa oo nasiib darro aan diyaar u ahayn inay masuuliyaddaas qaadaan waqti xaadirkan.
Waxaanse ku naxay markii ay soo baxday nuxurka waxyaabihii Madaxweyne Farmaajo kala hadlay Ra’sul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed iyo Madaxweynaha Eritrea Isaias Afwerki kulankii ka dhacay magaalada Bahir Dar 12kii bishan Nofembar.
AFEEF: Qoraalkan waa tarjumaadda qormada Africa Intelligence oo kaliya. Kuma jirto wax fikirkeyga ah haba yaraatee.
MAXAA LAGA HADLAY OO AAN SHACABKA LOO SHEEGIN?
Qormo xasaasi ah oo si kooban uga hadashay wada hadalka saddexda masuul— oo dabcan aan ku jirin war saxaafadeedkii laga soo saaray kulankaasi, ayaa lagu daabacay Africa Intelligence (AI), qeybteeda Horn of Africa. Qormada oo ku saleysan ilo Galbeed iyo kuwa Geeska ayaa sidan ku billaabatay:
“AMISOM waxay tageysaa, Itoobiyaase imaaneysa
Dowladaha reer Galbeedka, oo aan ahayn kaliya UK, ayaa ka walaacsan qorshaha amni-kala-wareegidda AMISOM ee Ciidamada, Itoobiya waxay dooneysaa inay saldhig ka furato gudaha waddanka…
Qabyo Qaraar soo baxay 12kii Nofembar kaasi oo Dowladda UK dooneyso inay u gudbiso Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay , ayaa London waxay ku muujisay walaaca ay ka qabto maamul-xumida hubka iyo rasaasta ee ka dhex jirta Ciidamada Xoogga Dalka Soomaaliya (SNA) waxayna soo jeedisay in Ciidamada Xoogga la siiyo lacagtooda si loo fududeeyo amni-kala wareegidda AMISOM (Hawlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya).
AMISOM waxaa lagu wadaa inay dalka ka baxdo 2021 ugu dambeyn. Madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni iyo Dhiggiisa Burundi Pierre Nkurunziza waxay damceen inay ciidamadooda sii joogaan kaddib bixitaanka AMISOM laakiin waxay (Museveni iyo Nkurunziza) ka dalbanayaan Dowladda Soomaaliya lacago aad u badan.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu si sii kordheysa u luminayaa waxa yar ee xukun ah ee uu ku lahaa gobollada dhowrka ah. Cabsida laga qabo in Federaalka Soomaaliya uu kala googo’o ayaa si weyn u soo ifbaxaysa. Farmaajo-na waa qofka kaliya ee weli rumeysan abuuritaanka Soomaali Weyn.
Iyadoo lagu guda jiro duruufahan halista ah, Ra’isul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed Ali wuxuu go’aansaday inuu qabto shir kale oo saddex geesood ah oo uu u qabtay Farmaajo iyo Isaias Afwerki, kana dhacay 12kii Nofembar magaalada Bahir Dar.
Sida ay sheegayaan ilo wareedkeena, wuxuu isagu (Abiy) u soo jeediyey Dhiggiisa Soomaaliya in Itoobiya saldhig military ka sameysato waddankiisa (Soomaaliya). Farmaajo wuu aqbalay fikradda, wuxuuna soo jeediyay Magaalada Marka (Shabeelaha Hoose) inay noqoto meesha ay suurtagalka tahay (in saldhigga laga sameeyo).
Taasi bedddelkeeda, wuxuu (Farmaajo) codsaday in Shirkadda Ethiopian Shipping and Logistics Services Enterprise oo ah shirkad Dowladda Itoobiya leedahay ay ka baxdo saamiga 19% ee shirkadda ku leedahay maamulka Dekedda Berbera ee Somaliland, halkaasoo saamiga ugu badan ee maamulka ay leedahay Shirkadda DP World.
Markii lagu wargaliyey heshiiskan Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi, oo aad u doonayey inuu muujiyo ka madax-bannaanida xiriirka Muqdisho, ayaa wuxuu warbaahinta dhexdeeda eedeyn ugu jeediyey Farmaajo isagoo ku eedeeyay inuu Itoobiyaanka siiyey fasax saldhig military uga furanayaan Magaalada Seylac ee xeebta Somaliland.
Gabagabadii Abiy Ahmed Ali ayaa diiday soo jeedinta Farmaajo.
← Banadir regional administration answers the corruption allegations
Cabdicasiis Lafta-Gareen iyo Mukhtaar Roobow oo helay shahaadada Musharaxnimo+Sawirro →
Maxaa kala sooctaa Musiibada xalka la mooday ee Soomaaliya heesata!